शाओमी मी:: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात | Androidsis
शाओमी मी now अब आधिकारिक छ: ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्त
धेरै हप्ता पछि लीक भयो, शाओमी मी officially लाई आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च अन्त यसको देशको एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। यो भन्दा पहिले यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुतीकरण MWC 2019 मा यस आइतवार हुनेछ। केही हप्ता पहिले फेब्रुअरी २० मा चीनमा प्रस्तुतीकरण, केहि अन्तमा भएको छ। त्यसैले हामीलाई यस उच्च-अन्तको बारेमा सबै कुरा थाहा छ।
हामी यस सियामी मी from बाट के आशा गर्न सक्छौं? यी हप्ताको चुहावटलाई धन्यवाद हामीसँग पहिले नै यस फोनको बारेमा धेरै विवरणहरू थिए। यसको ट्रिपल रियर क्यामेराबाट, एकमा स्क्रिनमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर निर्मित र धेरै अन्य विशिष्टताहरू। अन्तमा, चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्त आधिकारिक हो।
चिनियाँ ब्रान्डको यो मोडेल दायराको शीर्ष हो। एउटा नयाँ चिन्ह जुन ब्राण्ड यस उच्च-अन्तको दायरामा चाखलाग्दो मोडेलहरू उत्पादन गर्न सक्षम छ। त्यसैले यो एक धेरै लोकप्रिय स्मार्टफोन बन्न निश्चित छ। चीन मा यो पहिले नै छ, अहिले सम्म ठूलो संख्यामा भण्डारहरू छन्।
1 विनिर्देशों Xiaomi Mi 9
2 शाओमी मी:: पूर्ण उच्च-अन्त
विनिर्देशों Xiaomi Mi 9
यस सियाओमी एमआई the को विनिर्देशहरूको अंश यी हप्ता चुहावट भएको छ। यद्यपि अब तिनीहरू अन्ततः पुष्टि गर्न सक्षम भएका छन्। त्यसैले हामी पहिले नै थाहा छ कि चिनियाँ ब्रान्डको यो उच्च-अन्तबाट के आशा गर्ने। तपाईंबाट गुण र उत्कृष्ट प्रदर्शन। यी यसको पूर्ण विशिष्टताहरू हुन्:
प्राविधिक विशिष्टता Xiaomi Mi 9
मोडेल हामी9हौं
अपरेटिङ सिस्टम MIUI9को साथ एन्ड्रोइड Pie पाई
स्क्रिन .6.39..1080-इन्च सुपर AMOLED 2280 x २२ 19० पिक्सेल रिजोलुसन र १:: ratio अनुपातको साथ
आन्तरिक भण्डारण 128 / 256 जीबी
रियर क्यामेरा + 48 + १ + + १२ ए.पी. अपर्चरf/ १.16 रf/ १.२ PDAF र LED फ्लैशको साथ
अगाडिको क्यामरा 20 सांसद
कनेक्टिविटी ब्लुटुथ .5.0.० GPS युएसबी-सी वाइफाइ 802.11०२.११ एसी G जी / एलटीई डुअल सिम यूएसबी-सी
अन्य सुविधाहरू स्क्रिन NFC अवरक्त र सहायक बटन मा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर निर्मित
ब्याट्री द्रुत चार्जको साथ 3.300 एमएएच
आयामहरू 157.5 x 74.67 x 7.61 मिमी
वजन 173 ग्राम
मूल्य पुष्टि गर्न
यो शाओमी मी हामीसँग सामसु Super सुपर एमोलेड प्यानलको साथ आउँदछ। त्यसोभए चिनियाँ ब्रान्ड गुणस्तरको लागि प्रतिबद्ध छ, यद्यपि यसले यन्त्रको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्दछ। यसले उपकरणमा कर्निंग गोरिल्ला ग्लास protection सुरक्षाको अतिरिक्त n०० नाइटहरू सम्मको चमकको लागि रोजेको छ। चिनियाँ ब्रान्डले फोनको अगाडि धेरै फाइदा लिएको छ किनकि यसको पर्दा यस फ्रन्टको .600 ०.।% छ। अधिक स्क्रीन र अधिक सावधानी निशान। वास्तवमा, किनार धेरै कम गरिएको छ। ब्रान्ड भन्छ कि तल किनारा %०% ले घटाइएको छ।
शाओमी मी:: पूर्ण उच्च-अन्त
यो महिनौं को लागी टिप्पणी गरीरहेको थियो, शाओमी मी9ब्राण्डको पहिलो स्मार्टफोन हो जुन स्न्यापड्रैगन 855 XNUMX छ। यसैले हामी उपकरणबाट अपरेशनको सर्तमा ठूलो शक्तिको आशा गर्न सक्छौं। यो र्याम र भण्डारणको दुई संस्करणहरू, संस्करणको आधारमा रिमको and र GB जीबी र १२6 र २8 जीबी भण्डारणको साथ गर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले चाहेको संस्करण छनौट गर्न अनुमति दिनेछ।
उपकरणको पछाडि यस्तो चीज छ जुन धेरै चासो उत्पन्न गर्दछ। किनभने यस मोडल ट्रिपल रियर क्यामेराको साथ आउने ब्राण्डको पहिलो हो। तेसैले यस अर्थमा यसको धेरै आशा गरिन्छ। हामी भेट्छौं MP 48 MP सेन्सर, अर्को १ MP MP का अल्ट्रा पनोरमिक र क्यामेरा टेलिफोटो optics र १२ MP सेन्सरको साथ तेस्रो स्थानमा। यसैले यो एन्ड्रोइड मा यस क्षेत्र मा एक शक्तिशाली शक्तिशाली स्मार्टफोन को रूप मा स्थित छ।
फिंगरप्रिन्ट सेन्सर स्क्रीनमा एकीकृत भएको छ। शियाओमीले टिप्पणी गरे कि यसमा धेरै सुधारहरू गरिएको छ। वास्तवमा, प्रस्तुतीकरण अघि ब्रान्डले घोषणा गरिसकेको छ कि यो सियाओमी एमआई of को फिंगरप्रिन्ट सेन्सर बजारमा सब भन्दा छिटो हो। तिनीहरूले स्क्रीनमा ठूलो सतह क्षेत्र कब्जा गरेर यो हासिल गरेको छ, जसले राम्रो सञ्चालनको अनुमति दिन्छ।
फोनको ब्याट्री 3.300०० एमएएच छप्रोसेसरको साथ संयोजनमा पर्याप्त। अपेक्षित रूपमा, यो एक द्रुत चार्जको साथ आउँछ। थप रूपमा, हामी वायरलेस चार्जिंग पनि फेला पार्दछौं, पहिलो पटक चिनियाँ ब्रान्डको यस दायराको स्मार्टफोनमा। अर्को तर्फ, शाओमी एमआई पहिले नै एन्ड्रोइड पाईको साथ MIUI9को साथ अनुकूलन तहको रूपमा आउँदछ।
शाओमी मी चीनमा प्रस्तुत भैसकेको छ। त्यसोभए हामीसँग चीनमा उपकरणको आधिकारिक मूल्यहरू छन्। निश्चित रूपमा आइतवार यूरोपमा यसको मूल्य MWC २०१ at मा यसको प्रस्तुतीकरणमा खुलासा हुनेछ। तर, चीनको मूल्यको साथ हामी उपकरणबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने कुराको कल्पना गर्न सक्दछौं।
कम्तिमा चीनको अवस्थामा यस उपकरणको तीन बिभिन्न संस्करणहरू हाम्रो पर्खाइमा छन्। यी प्रत्येक उच्च-अन्त संस्करणहरूको मूल्यहरू हुन्:
//6 जीबी संस्करण २,64 युआनको मूल्य हो (२326० यूरो बदल्नका लागि)
//१8 जीबी मोडेलको २,128 yuan युआन खर्च हुनेछ, जुन लगभग छ 379 यूरो परिवर्तन गर्न
Ia/२9 जीबीको साथ शाओमी मी को 8, 256 युआन (लगभग) 457 यूरो परिवर्तन गर्नका लागि)
यद्यपि सबैभन्दा सामान्य चीज भनेको त्यो हो युरोपमा उपकरणको मूल्य प्रक्षेपणमा अधिक हुनेछ। तर अहिले हामीलाई थाहा छैन उनीहरू चीनमा भएको मूल्य भन्दा कति महँगो हुनेछन्। थप रूपमा, MWC २०१ its मा यसको प्रस्तुतीकरणमा हामी यो जान्छौं कि यो कहिले युरोपमा सुरू हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » शाओमी मी now अब आधिकारिक छ: ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्त
Xiaomi Mi9SE: ब्रान्डको नयाँ प्रीमियम मध्य-दायरा
बूस्ट बडिजको साथ एक रमाईलो र लत अनौपचारिक